हिँड्यौ हामी मतदान गर्न ! [फोटोफिचर] Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
बुटवलः विभिन्न पेशा-व्यवसाय गरेर बसेका नागरिकहरू धमाधम मतदानका लागि आ-आफ्नो थातथलोतर्फ फर्किन थालेका छन्। पर्सि हुने मतदानका लागि स्थायी घर जान बुटवलको नयाँबसपार्क, पाल्पा बसपार्कमा नागरिकको भीड बढेको छ।
बुटवलको बसपार्कमा भेटिएकी मालिका गाउँपालिका- ७ की सरिता लम्सालले पहिलो पटक मतदात गर्न लागेकाले गाउँ जान लागेको बताइन्। अध्यायनका लागि रुपन्देहीको सालझण्डीमा बस्दै आएकी उनले योग्य, सक्षम र गाउँको विकास गर्ने नेतालाई आफ्नो गोप्य मतदान हुने बताइन्।